Lamba maimaimpoana 12 ho an'ny volavolanao | Famoronana an-tserasera
ny Textures dia loharanom-pahalalana tokony horaisina rehefa manamboatra tranokala. Betsaka amintsika no mampifandray azy ireo amin'ny famolavolana "maloto", saingy izany dia satria nahita pejy maro izay nanararaotra izy ireo.
Es tena zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hisafidianana firafitra tsara, izay mifanaraka amin'ireo singa hafa amin'ny tranonkala ary tsy manelingelina ny famakiana. Tadidio fa ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra tokony hikajiana amin'ny famolavolana tranonkala dia ny legibility: andao ialantsika ny fiaviany mainty sy ny endritsoratra manga na manga maro na navy, na karazana fanadalana chromatic. TSY mifangaro tsara izy ireo.
Andao hanamora ny famakiana. Andao hampiasa fifanoheran-kevitra matanjaka eo amin'ny loko afara sy ny loko typografika. Ho mora kokoa hatrany ny mamaky eo ambadika miloko maivana noho ny amin'ny loko miloko mainty, satria mahakivy kokoa ity farany.
Raha raisina izany dia azontsika atao ny misafidy ny endrika mety indrindra amintsika. Indraindray, isika ihany no hahafantatra ireo firafitra ampiharina amin'ny volavolainay: raha tsy hitan'ny mpampiasa izy ireo dia famantarana tsara izany. Satria izany dia hidika fa ny fifantohana dia ny soratra fa tsy ny haingon-trano.
Ireto misy lamba 12 maimaim-poana sintonina sy ampiasaina amin'ny volavolanao. Safidio ny mety indrindra!
Rindrina biriky fotsy
Hazo azo volavolaina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Textures » Teknolojia 12 Maimaimpoana